Ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy
"1 SAMBATRA ny olona Izay tsy mandeha eo amin’ny fisainan’ny ratsy fanahy, Ary tsy mijanona eo amin’ny làlana falehan’ny mpanota, Ary tsy mipetraka eo amin’ny fipetrahan’ny mpaniratsira; 2 Fa ny lalàn’i Jehovah no sitrany; eny ny lalàny no saintsaininy andro aman’alina. 3 Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron’ny rano velona izy, izay mamoa amin’ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. 4 Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akofa aelin’ny rivotra izy. 5 Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hahajanona eo amin’ny fitsarana, na ny mpanota eo amin’ny fiangonan’ ny marina. 6 Fa fantatr’i Jehovah ny làlan’ ny marina, Fa ny làlan’ ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin’ny fahaverezana." Salamo 1:1-6
Ny tsara fanahy? Tsy mifampiraharaha amin’ny ratsy na manan-draharaha aminy. Raha azony hatao aza dia misintaka lavitra ireo mpanao ratsy mba tsy ho voataonany. Raha fehezina dia miaro mafy ny tenany tsy ho voapentimpetin’ny fahotana.
Tia ny Tenin’Andriamanitra. Manana fitaovana mahery vaika izy ho fiarovana ny tenany: ny filomanosany ao amin’ny Tenin’Andriamanitra isan’andro. Zava-dehibe aminy ny mampifanindran-dàlana ny fiainany isan’andro amin’ny Tenin’Andria-manitra.
Vokatra. Fiainana be dia be zara ho azy ireo (3) : firoboroboana, famokarana, fahombiazana amin’ny lafiny rehetra, raha fehezina dia sambatra (1).
Ny ratsy fanahy. Ny an’ny ratsy fanahy kosa dia ny mifanohitra tanteraka amin’izay voalaza rehetra izay. Ireo tena tsy tamana koa eo amin’ny fiombonan’ny mino.
Ny fitsaràn’Andriamanitra (5, 6). Ny mpanao Salamo eto dia maneho karazan’olona roa, tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ho avy ny fotoana izay hametrahana azy roa ireo amin’ny toerany mandrakizay, toerana samihafa izay tsy afaka hiaraka na oviana na oviana, samy manana ny azy. Ny marina, miaraka amin’Andriamanitra, ny ratsy fanahy kosa, any amin’ny fahaverezana mandrakizay. Ny safidinao dieny eto an-tany ihany no hamaritra ny mandrakizainao.
Tenin’Andriamanitra: “Tariho amin’ny làlana mandrakizay aho” Salamo 139:24b
Ho saintsainina: 2 Korintianina 6:14 "Aza mety hasiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin’ny tsy mino. Fa inona no iraisan’ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonan’ny mazava sy ny maizina?"